China FB-42 SPLIT SET BOLT (Stabilizer Friction) ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | TRM
Dị ka ihe ọzọ na-eme ka ihe kwụsie ike nke FB-47 Split Set Bolt ejiri mee na ngwa, Dia.42mm nwere otu ụdị ahụ bolt nke nwekwara ike ịnye ụzọ zuru oke na nchekwa maka nkwado ala dịka FB-47 bolt na-eme, na-agbasakwa ebe niile. na -ewu ewu na -eji nkwado okwute na ala na -egwupụta akụ, ọwara mmiri na ọrụ mkpọda wdg.
Site n'iji otu FB-39 Split Set Bolt mee otu akwa tensile dị elu iji mee ka FB-42 kewaa bolt, anyị na-ahazi onye na-emegharị akwụkwọ mpịakọta anyị iji gbanwee dayameta nke bolt ntakịrị site na 39mm ruo 42mm iji mezuo ihe ọ bụla chọrọ pụrụ iche nke ndị ahịa dị iche iche. jide n'aka na enwere ike iji bolt anyị na gburugburu ọrụ dị iche iche, ka ọ ga -emeju ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
PLC-Controled Rollformer na Auto Welders anyị dị elu nwere ike idobe ikike mmepụta anyị ka ọ nọrọ n'ọkwa dị elu n'ahịrị a, n'otu oge iji hụ na ogo nke Split Set Bolt anyị ga-emezu ihe ọkọlọtọ mba ụwa chọrọ. ka anyị nwee ohere ịnye ọtụtụ ndị ahịa ama ama n'ụwa ihe nkedo setịpụrụ (mgbachi mgbachi).
Weld na bolt ojii na -egosi ịdị mma weld nke bolt anyị, nke ruru ọkwa mba ụwa niile kachasị elu, na ihe niile dabere na njikwa njikwa njikwa anyị (GMC) siri ike, yana sistemụ ịma ọkwa ihe mberede na nchekwa nke jikọtara ya na usoro mmepụta. , iji hụ na ịdị mma na -agbanwe agbanwe na nke kwụsiri ike n'oge niile na -emepụta ya.
A ga -enyocha nyocha mkpuchi Zinc site n'oge ruo n'oge iji mee ka mkpuchi ahụ rute ihe ndị ahịa chọrọ, ma nwee mkpuchi dị larịị na nkezi. Nkwakọ ngwaahịa bụ otu ihe nkwado ala ọzọ na -ekewa setịpụrụ bolt (mgbatị mgbachi) nke bụ nkeji 150 kwa pallet. Osisi na Metal pallet ha abụọ dị.
Ịkpọchi dayameta A 42mm Ike Nweta Nkeji 345 Mpa (85KN) Akwadoro Nkịtị Bit nkịtị 38-41 mm n'obosara
Ogologo mkpọchi B 0.9-3.0m Ahụkarị 445Mpa (110KN)
Taper End dayameta C 35mm Tube Ultimate Tensile Ike Nkeji 470 Mpa (115KN) Ahụkarị Ịgbaji Ike 124KN
Kpọchie oghere Wide F 20mm
Mgbanaka Wire Ring I 6mm Oghere Oghere Oghere 38-41 mm n'obosara Mgbatị Axial kachasị Ahụkarị 21% (Thk <16mm)
FB42-0900 Gbasaa Bolt 42-900 42 900 Emeghị ọgwụgwọ 1.70 150 -
FB42-1800 Gbasaa Bolt 42-1800 42 1800 Emeghị ọgwụgwọ 3.23 150 -
FB42-2100 Gbasaa Bolt 42-2100 42 2100 Emeghị ọgwụgwọ 3.76 150 -
FB42-2400 Gbasaa Bolt 42-2400 42 2400 Emeghị ọgwụgwọ 4.30 150 -
FB42-3000 Gbasaa Bolt 42-3000 42 3000 Emeghị ọgwụgwọ 5.37 150 -
FB42-0900G Gbasaa Bolt 42-900 HDG 42 900 Itinye Hot Galvanized 1.80 150 -
FB42-1800G Gbasaa Bolt 42-1800 HDG 42 1800 Itinye Hot Galvanized 3.38 150 -
FB42-2100G Gbasaa Bolt 42-2100 HDG 42 2100 Itinye Hot Galvanized 3.94 150 -
FB42-2400G Gbasaa Bolt 42-2400 HDG 42 2400 Itinye Hot Galvanized 4.50 150 -
FB42-3000G Gbasaa Bolt 42-3000 HDG 42 3000 Itinye Hot Galvanized 5.63 150 -
FB-42 SPLIT SET BOLT atụmatụ
● Dị ka ihe nkwado nkwado isi ala ọzọ, FB-42 Split Set bolt bụkwa nke High Tensile Steel na-eme, ọkwa ọkwa dị iche iche dị dabere na gburugburu iji dị iche iche iji chekwaa ọnụ ahịa nkwado ala.
Site na ahụ ya nke C, ọ bụkwa ụzọ kachasị mfe ma dị irè maka nkwado ala, imepụta ogologo oge zuru oke nke esemokwu esemokwu ruo n'oké nkume, na -anya ụgbọ ala na ntupu na efere n'ime oghere iji nweta ala ngwa ngwa. nkwado.
● Galvanizing na Bolt Split Set Bolts adịghị agwọ ya dị.
Ngwa zuru oke dị.
A na-eme FB-42 Split Set Bolt site na eriri eriri tensile dị elu, nke a na-akpụgharị ka ọ bụrụ eriri ogologo ogologo C n'ụdị ogologo ya niile. A na -agbanye mgbanaka nchara na njedebe nke tube site na ngwaọrụ ịgbado ọkụ akpaka, nke bụ idobe efere ahụ n'elu okwute.
Nke gara aga: THREADBAR BOLT
Osote: WELDED WIRE MESH (Ejiri ya na ntinye nkwado ala)
Gbasaa Setịpụrụ ụlọ nrụpụta ihe mkpuchi ihe
Nkwado n'okpuruala Kewaa Ntọala